Kiiskan Battery-ga Isku-dhafan ee iPhone X wuxuu kaloo Taageerayaa Lacag-Bixin la'aanta | Wararka IPhone
Hadda waxaa suurtagal ah in kiis laga helo batteriga oo lagu daro iPhone X. Iyo kan, marka lagu daro ka faa'iideysan karaa lacag-bixinta wireless-ka ah. Qofka mas'uulka ka ah qalabkan waa dukaanka internetka ee Chytah. Sidoo kale, kiiskan waxaa laga heli karaa midabbo kala duwan oo batteriga ku dhex jira uu yahay mid awood badan leh
Inaad awood u yeelatid inaad batteri dheeraad ah ku haysatid iphone-keena markaan ka maqanahay xafiiskayaga ama gurigeena waa raaxo. Muddo sanado ah hadda, waxaa suurtagal ah inaad ku haysato culeys dheeri ah jeebkaaga. Tani waxay noqon kartaa iyada oo loo marayo laba qalab: batteriga dibedda ama dacwad ilaalin ah oo noo oggolaaneysa inaan ka qaadno terminaalka inta aan isticmaaleyno; kuwaas oo ah, dacwad leh batari isku dhafan. Maantana waxaan kuu keenaynaa xal aad u xiiso badan.
Marka ay timaado kiisaska ilaalinta ee leh batari ku dhex jira, magac ayaa hubaal maskaxda ku soo dhacaya si deg deg ah: Mophie. Waxaa laga yaabaa inay tahay nooca ugu caansan ee dareenkan waxayna leedahay daboolida astaamahan moodooyinka badan ee suuqa. Si kastaba ha noqotee, hadda ma lahan dabool sida halyeeyga aan maanta ku tusinno: Ma jiro nooc awood u leh inuu soo dallaco iPhone-ka isla markaana taas beddelkeeda waxaa lagu soo oogi karaa iyada oo la adeegsanayo xukun wireless iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda Qi.
Daboolkaan, oo lagu heli karo midabbo kala duwan (buluug, casaan, jaalle, madow iyo casaan), wuxuu leeyahay batrool awooddiisu tahay 3.600 milliamp; taasi waa in la yiraahdo, mala awaal ahaan waxaan lahaan laheyn terminal leh laba bateri. Laakiin sidoo kale waa taas, oo sidaan soo sheegnay, uma baahnid fiilo aad ku buuxiso, Haddii aad horey u haysatid saldhig lacag bixin ah oo la jaan qaadi kara tikniyoolajiyada 'Qi', waxaad ku sii wadi kartaa adeegsiga kiiskan ay iibisay Chytah.
Sida looga wada hadlay qeexitaankiisa, waxaan heli laheyn tamar ku filan oo aan ku soo dallacno iPhone X dhowr jeer in ka badan. Taasi waxay tiri, xagga dambe ee kiiska waxaan ku yeelan doonnaa LED-yo tilmaami doona waqti walba sida ay tahay xukunka dacwaddan. Ugu dambeyntiina, qiimaha tan waa 83,95 euro, inkasta oo hadda la joogo waa macquul inaad ku hesho 63 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Kiiskan batari-ka ee lagu rakibay iPhone X wuxuu sidoo kale taageerayaa xukun wireless
Ku saabsan kiiska iPhone ee chyta Qi oo aad ku sheegtey maqaalkii hore, waxaad dhahdaa ka dib markaan dalbado oo aan sugo wax ka badan hal bil oo aanan helin lambar raad raac ah waa inaan dalbadaa lacag celin, tan iyo markii aan sugay oo aan arkay taas ma aysan imaanin, waan la xiriiray waxaana ii soo baxday in shirkada duulimaadka aysan dooneynin inay rarto maxaa yeelay waxay laheyd baytariyada lithium-ka xitaa looma soo sheegin dhibaatadan. Waxay mar labaad ii soo direen side kale oo lagu kalsoon yahay, waxay igu yidhaahdeen… .. laakiin iyaduna ma iman, aakhirkii waa inaan weydiisto in lacagta la ii celiyo. Waxaan kugula talinayaa in aan la sameeyo nooc kasta oo amar ah maaddaama ay yihiin musiibo, ma diraan nambarka raadraaca ama wax macluumaad ah oo ku saabsan amarka. Khibrad xun
Halide, waxay ku darsataa taageerada Apple Watch, saacad iyo waxyaabo kale oo badan
Apple Podcast wuxuu dhaafey 50.000 milyan oo soo degsasho ah